DV को लटरी (कार्यक्रम विविधता आप्रवासी भिसा) | USAHello | USAHello
कार्यक्रम विविधता आप्रवासी भिषा लोटरी पनि DV भनिन्छ, वा भिसा लटरी हरियो कार्ड लटरी. हरेक वर्ष, को 1995 एक 2020, को. THE. यसलाई प्रदान 50,000 कार्यक्रम मार्फत भिसा. मा 2021, तिनीहरूले सम्मानित गरिनेछ 55,000 भिसा. मान्छे अनियमित चयन रोजेका छन् (संयोगले) भिसा लटरी मा. तपाईं एक भिसा जीत भने, तपाईं बाँच्न सक्छ, काम र संयुक्त राज्य अमेरिका मा अध्ययन. पछि5वर्षको, तपाईं नागरिकता लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
DV को चिट्ठा कार्यक्रम 2021
राज्य विभाग लागि विविधताको भिसा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ 2021. उहाँले हुनेछ भन्छन् 55,000 विविधता भिषा (DV) उपलब्ध. DV को कार्यक्रम को लागि दर्ता निःशुल्क छ. कार्यक्रम मा चयन आवेदकहरुलाई (चयन) तिनीहरूले योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्नै पर्छ.
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि लागि आवेदन अवधि 2021 यसलाई पूरा गरिएको छ.
म DV चिट्ठा लागि कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
को अनुरोध2अक्टोबर 2019 र5नोभेम्बर 2019
लागि आवेदन अवधि 2021 यो भन्दा बढी छ.
आवेदकहरुलाई इलेक्ट्रनिक DV को-2021 कार्यक्रम को लागि प्रविष्टिहरू पेश गर्नुपर्छ dvlottery.state.gov दिउँसो बीच, पूर्वी समय (EDT) (GMT-4), बुधवार2अक्टोबर 2019 र दिउँसो, पूर्वी मानक समय (छ) (GMT) -5), मंगलवार5नोभेम्बर 2019.
पहिलो निर्देशनहरू आधिकारिक विविधता भिषा कार्यक्रम आप्रवासियों लागि पढ्न 2021 (DV-2021).
प्रारम्भिक लागि लागू!
दर्ता अवधि को अन्तिम हप्ता प्रवेश सम्म प्रतिक्षा नगर्नुहोस्, किनभने त्यहाँ वेबसाइट प्रयोग र ढिलाइ गर्नाले थुप्रै मानिसहरू हुनेछन्. कुनै लेट प्रविष्टिहरू वा कागज प्रविष्टिहरू स्वीकार गरिनेछ.
केवल एकपटक प्रविष्ट
व्यवस्था केवल एक प्रत्येक दर्ता अवधिमा प्रति व्यक्ति प्रवेश अनुमति दिन्छ. राज्य विभाग धेरै प्रविष्टिहरू पत्ता लगाउन हुनेछ. एक भन्दा बढी प्रवेश मानिसहरूलाई अयोग्य हुनेछ.
DV को चिट्ठा लागि कसले लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं शिक्षा हुनुपर्छ दोस्रो
एक उच्च विद्यालय उपाधि बराबर छ वा दुई वर्ष देखाउन पर्छ भनेर एउटा प्रमाणपत्र काम अनुभव एक काम मा प्रशिक्षण वा अनुभव कम्तिमा दुई वर्ष आवश्यकता. आफ्नो अनुभव अन्तिम पाँच वर्ष हुनुपर्छ.
तपाईं पूरा गर्नुपर्छ आवेदन (डी एस-260) मा-लाइन को नामांकन अवधिमा2गर्न अक्टोबर5नोभेम्बर 2019. तपाईं अन्य समयमा आफ्नो नामांकन पठाउन सक्नुहुन्छ.
तपाईं एक आवश्यक हुनेछ मान्य पासपोर्ट आफ्नो देश, यो एक कम्युनिस्ट देश नभएसम्म वा अमेरिकी सरकारी एक छुट छ. THE. म तपाईंलाई एउटा राहदानी आवश्यक छैन भन्न.
एक देशबाट हुनुपर्छ भन्ने कुनै तल सूचीबद्ध छ.
एक विविधता भिसा लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ जो मानिसहरू
अघिल्लो वर्ष मा संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै आप्रवासी पठाइएको छैन भनेर देशका व्यक्ति विविधता भिसा प्रदान गर्दै. पनि, कुनै देश भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्छन् 7% एक वर्ष मा उपलब्ध DV को.
DV-2021 को लागि, निम्न देशहरूमा को निवासी कुनै तिनीहरूले लागू गर्न योग्य हुनुहुन्छ:
चीन (महाद्वीप मा जन्म) *
* हङकङ SAR जन्म व्यक्ति, मकाउ SAR र ताइवान योग्य हुनुहुन्छ.
त्यहाँ भने म ती देशहरूको एक हुँ योग्य कुनै पनि तरिका हो?
तपाईं योग्य देशमा जन्मनुभएको भने, तपाईं योग्य हुन सक्छ अन्य दुई तरिकाहरू छन्:
आफ्नो पति देश जसको निवासी योग्य हुनुहुन्छ मा जन्मिएको छ?
यदि हो, तपाईं आफ्नो पति को जन्म देश दावी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं र तपाईंको पति दुवै चयन गरिएको आगत मा उल्लेख गरिएका प्रदान, प्रदान योग्य र विविधता भिसा छन्, र साथ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश.
तपाईं देश जसको निवासी अयोग्य छन् जन्म गर्नुभयो, तर जो न अभिभावक जन्म भएको थियो वा आफ्नो जन्म को समय मा कानूनी निवासी?
यदि हो, तपाईं देश जसको निवासी DV-2021 कार्यक्रमको लागि योग्य छन् भने एक अभिभावक को जन्म देश दावी गर्न सक्नुहुन्छ. यो के मतलब थप विवरण लागि, हेर्न भिसा लटरी को आधिकारिक वेबसाइट.
चेतावनी DV चिट्ठा घोटाला
त्यहाँ धेरै वेबसाइट र मानिसहरू एक अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्न पैसा दिन झुक्याउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ. तिनीहरूलाई विश्वास छैन. भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन. राज्य विभाग यी मध्ये एक तपाईंको आवेदन पेश गर्न सल्लाह “भिषा परामर्शदाता”. उदाहरणका लागि, जस्तै www.usgreencardoffice.com एक वेबसाइट तपाईं चार्ज $ 98 तपाईंको आवेदन पेश गरेर. अन्य वेबसाइटहरूमा तिनीहरूले आधिकारिक सरकार वेबसाइटहरु छन् बहाना. सम्झना:
यो DV चिट्ठा प्रविष्ट गर्न मुक्त
तपाईं तिर्ने द्वारा विजेता को आफ्नो संभावना वृद्धि गर्न सक्दैन
तपाईं थप जानकारी पढ्न सक्नुहुन्छ भिषा स्क्याम विविधता. र तपाईं आधिकारिक जानकारी र DV चिट्ठा प्रविष्ट.
को चिट्ठा लागू गर्न कसरी यो भिडियो हेर्नुहोस्
लागू लागि सुझाव
गर्छन् एक भन्दा बढी अनुप्रयोग गर्न. तपाईं लटरी देखि बहिष्कृत गरिनेछ.
तपाईं फारम पूरा गर्न सुरु गर्नु अघि आफ्नो सबै जानकारी भेला. यो तपाईं को लागि प्रक्रिया सुविधा हुनेछ.
सबै फारम प्रविष्टिहरू पूरा गर्न निश्चित हुनुहोस्.
वेबसाइट हेर्नुहोस् संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास वा वाणिज्य दुतको कार्यालय पत्ता लगाउन आफ्नो देश मा आफ्नो देश थप जानकारी लटरी हुन सक्छ भने.
धेरै भाषामा भिषा निर्देशन
पढ्न र धेरै भाषाहरू राज्य विभाग मा भिसा निर्देशन डाउनलोड गर्न सक्छन्. (नोट: यी निर्देशनहरू छन् 2020. निर्देशनहरू अद्यावधिक 2021 उपलब्ध हुँदा).
बुल्गेरियन / बुल्गेरियन
पोर्चुगिज / पोर्चुगिज
युक्रेनी / युक्रेनी भाषा
पोलिस / पोलिस
फ्रान्सेली / फ्रान्सेली
इटालियन / Italiano
टर्की / टर्की
रोमानियाली / रोमानिया
अरबी / अरबी
उज़्बेक /(o'zbek खाता)/
आर्मेनियाली / आर्मेनिया
अमेरिकामा अनुमति शरणार्थी संख्या. THE. मा 2019
हाम्रो निःशुल्क नागरिकता वर्ग लिन
नागरिकता लागि लागू गर्न कसरी पत्ता
ठगी चेतावनी अमेरिकी राज्य विभाग. THE.
होमपेज विविधता भिसा Travel.gov
यो पृष्ठमा जानकारी लिइएको छ राज्य को संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग. यो निर्देशन लागि निमित्त र सकेसम्म अक्सर अद्यावधिक. नमस्ते अमेरिका कानुनी सल्लाह प्रदान गर्दैन, न त हाम्रो सामाग्री को कुनै पनि कानुनी सल्लाह रूपमा लगिनेछ गर्न चाहनुभएको छ. तपाईं नि: शुल्क एक वकील वा कानुनी सहायता वा कम लागत खोजिरहेको भने, हामी तपाईंलाई पाउन मदत गर्न सक्छ निःशुल्क र कम लागत कानुनी सेवा.